Muraayadaha 'AR' ee Apple ayaa wali waxaa lagu xantaa wararka xanta ah. Wararka IPhone
Muraayadaha 'AR' ee Apple ayaa sii wada mawduucyada xanta
Waxaan la joognay dhowr xan iyo warar dhowr bilood ah oo tilmaamaya imaatinka ama soo bandhigidda suurtagalka ah tufaaxa xaqiiqda lagu kordhiyayXaqiiqdii, waxaan aragnay xantaan ka dhex jirta warbaahinta khaaska ah sanado faro ku tiris ah oo inyar ka yar suurtagalnimada dhabta ah ee kuwan ay ku dhamaan doonaan soo bandhigistooda ayaa qaabeysaneysa.
Maalmo ka hor waxaa jiray faallooyin ku saabsan wada-shaqeynta suurtagalka ah ee shirkadda 'Valve' iyo in muddo dheer la sheegay in aan arki doonno qaar ka mid ah muraayadahaas cusub sannadka 2020, laakiin xilligan ma jiraan faahfaahin dhab ah waana inaan sii wad sugida si loo cadeeyo imaatinka suurtagalka ah, xogta ayaa hada la filayaa bilaha soo socda iyo xoogaa muraayadaha dhabta ah muddo gaaban gudaheed.
Qalab ku jira iOS 13 wuxuu muujinayaa muraayadaha indhaha ee Apple
Waqtiga la cayimay wuxuu nagu qaadan karaa inaan aragno muraayadahaas maanta si gaar ah uma qeexna halka falanqeeyaha Ming-Chi Kuo uu sii wado isagoo leh bartamaha sanadka soo socda waxaan arki doonaa faahfaahinta muraayadahaas iyo in 2021 aan heli doonno noocyada ugu horreeya ee isku mid ah. Wararkii ugu dambeeyay waxay muujinayaan ilaa 2022 ma hayno faahfaahinta kuwan oo ay u badan tahay inay maanka ku hayaan inay bilaabaan moodal aad u caato ah oo aad u qaabeysan oo muraayadaha 2023 ah, sidaa darteed kuma filno hal nooc oo aan mid kale ku darno ...
Sida laga soo xigtay Macluumaadka Dhowr maamule ayaa la kulmay shaqaalaha Apple iyagoo muujinaya faahfaahinta muraayadaha indhaha ee suuragalka ah. Muraayadaha Apple ayaa la soo bandhigi doonaa sanadka 2022 iyadoo sanadka soo socdana la soo bandhigi doono nashqad qaabkan cusub leh. Qaybihii ugu dambeeyay ee muraayadaha oo ay weheliyaan shatiyadihii soo muuqday sannadihii la soo dhaafay ayaa muujinaya xiisaha Apple u qabo badeecadan, laakiin dhab ahaantii ma hayno wax la taaban karo oo ku saabsan sidoo kale iyo hadda labo moodal oo miiska saaran Way sii adkayn lahayd arrinta, waan arki doonaa waxa dhaca aakhirka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Muraayadaha 'AR' ee Apple ayaa sii wada mawduucyada xanta
Faahfaahinta ayaa ah, iyo kuweena horeba u isticmaalaya muraayadaha indhaha, sidee loo samayn doonaa, maxaa yeelay tagista shaneemada iyo daawashada filimka 3D naguma fiicna, innaga oo muraayadaha dusha ka saarayna kuwa kale.
Ku jawaab thiago
Ma qiyaasi kartaa iPhone leh 4 kamaradood oo gadaal ah? Qeybtan ka mid ah iPhone 12 ayaa muujineysa